SBS Burmese - SBS မြန်မာပိုင်း အစီအစဉ် - Study finds 1 in6Australian children in poverty - သြစီကလေး ၆ ယောက် ၁ ယောက်နှုန်းလောက် ဆင်းရဲတဲ့အဆင့်မှာ နေထိုင်ရ | Listen via Stitcher Radio On Demand
One-in-six Australian children live in poverty.
That's the finding from Child Social Exclusion, Poverty and Disadvantage Report by Uniting Care Australia, which is calling for significant government investment to improve the prospects of children in the worst-hit areas.
Child Social Exclusion နဲ့ Poverty and Disadvantage Report by Uniting Care Australia တို့ရဲ့လေ့လာမှုအရသိရတာဖြစ်ပြီးကလေးသူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်တိုးတက်ရေးအတွက်အစိုးရအနေနဲ့ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေလုပ်သင့်တယ်လို့တိုက်တွန်းနေကြပါတယ်။
Study finds 1 in6Australian children in poverty - သြစီကလေး ၆ ယောက် ၁ ယောက်နှုန်းလောက် ဆင်းရဲတဲ့အဆင့်မှာ နေထိုင်ရ